Sambava: Mpikirakira lavanila malaza tratra nahitana lavanila tsy matoy
lundi, 13 mai 2019 16:20
Sary Gasypatriote Sambava
Niaraka nanao be midina teny amin'ny Zandary androany atoandro ny delegasiona avy amin'ny « Plate Forme » notarihin'ireo avy amin'ny Prefektiora, ny avy amin’ny talem-paritry ny varotra sy avy amin'ny talem-paritry fambolena...natrehin’ny lehiben’ny Faritra SAVA nijery ifotony ireo lavanila milanja 34kg izay saron’ny Zandary tao amin'ny mpikirakira lavanila malaza iray ao Ambalamanasy Fokontany Antanifotsy-II, Sambava.
Ny sabotsy 11 mey 2019 no sarona amin'ny fanaovana lavanila mialohan’ny fisokafan'ny taom-piotazana, ity mpikirakira lavanila ity. « Niainga avy amin'ny loharanom-baovao marim-pototra avy amin'ny tsara sitrapo no nahitana izao vokatra izao, » hoy ny Lietnà Randrianirina Tahina, komandin’ny Kaompanian’ny Zandary Sambava.
Nanamafy ny teknisianina avy ao amin'ny Fambolena fa lavanila tsy mbola matoy tokoa ireo tratra ka tsy maintsy miroso amin'ny famotehana. Tsy mbola misy lavanila azo sokajiana ho matoy aty amin'ny Faritra SAVA raha amin'izao vanim-potoana izao, hoy hatrany ny fanazavana, koa tsy maintsy potehina fa tsy azo averina amin'ny tompiny raha misy tratra.
Hatolotra ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antalaha ny raharaha.
Faritra Indostrialy: Tonga ny Maorisiana
Volobe-Toamasina II: Hanorenana foibe famokarana herinaratra manana tanjaka 120 MW »